Gịnị mere ndị mmadụ ji ewe oke iwe na ndị na-agba ịnyịnya ígwè? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Okporo ụzọ na-emegide onye na-agba agba - otu esi edozi
Okporo ụzọ na-emegide onye na-agba agba - otu esi edozi
Gịnị mere ndị mmadụ ji ewe oke iwe na ndị na-agba ịnyịnya ígwè?
A ọgba aghara iwe nwere ike ịmalite n'ihi na aonye na-agba ígwè, ọkwọ ụgbọala, ma ọ bụ onye na-agafe agafe kwenyere na onye ọzọ na-eji ụzọ eme ihe adịghị mma, na-emebi iwu okporo ụzọ, ma ọ bụ n'ọtụtụ ọnọdụ n'ihionyechere na nsogbu nke onye ọrụ okporo ụzọ ọzọ na-emebi nchekwa ha.
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ịbụ ntakịrị ihe mgbakasị ahụ ugbu a. Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụghị naanị uwe na-atọ ọchị ma ọ bụ ụzọ igwe kwụ otu ebe, ọ dị ka ha eche na ha karịrị iwu mgbe ha na-agbafe n'okporo ụzọ, nwee ohere maka obi nkoropụ, ọbụnadị emeghị ka m wụfee ọkụ ọkụ, m na-ekwu ọ dị oke egwu, ọ bụghị ya, ọtụtụ ndị chere na ọ bụ ya na ndị mgbasa ozi na-eche n'echiche na e nwere ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eleghara iwu okporo ụzọ anya, na-agbaze n'okporo ụzọ ma ghara iji okpu agha na ekwentị, n'ihi ya enwere ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-enweghị mkpuchi, ha nwere ike ịdaba n'ime ụgbọ ala gị ha nwere ike ịdaba na gị. Achọpụtawo m ịnyịnya ígwè na ị na-na-esiwanye ike ike karịrị afọ ndị ziri ezi, na ha bụ kpam kpam-ejighị n'aka.
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eche n'ezie na ha karịrị iwu ma ọ dị ihe ọ bụla, yabụ ka anyị bido site na isi mgbe anyị na-ekwu maka ndị na-agba ịnyịnya, gịnị ka anyị bu n'uche na ikike ahụ? nke a ma ọ bụ ọbụlagodi nke ahụ, m na-ekwu, ụfọdụ ndị dị ka stereotype, mana enweghị ihe dịka onye na-agba ịnyịnya, enwere naanị ndị na-agba ịnyịnya ígwè ma a na-ewere na ịgba ígwè bụ akụkụ nke stereotype nsogbu nke ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ị A naghị ahụ ya dị ka onye na-emegbu mmadụ ma ọ bụ onye a zụrụ azụ ọwụwa anyanwụ, mana enwere nkwenye dị iche iche nke ịbụ onye na-agba ịnyịnya, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya igwe na-ejikwa usoro ụgbọ njem ndị ọzọ, yabụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè adịchaghị iche na ebe ọnụ ọgụgụ dị oke abughi ihe akaebe na ndi mmadu nwere ike imebi iwu banyere igwe ugbo ala karia n’oge obula. Ọtụtụ n’ime ndị na-agba ịnyịnya ígwè ahụ kwuru na ha mere nke a n’akụkụ iji mee ka nchekwa nke ndị mmadụ na-ejikarị ọkụ ọkụ agụ akwụkwọ n’ihi na ha na-atụ ụjọ ma ọ bụrụ na ihe mere ha tupu oge eruo, ha gaara enwe mmekọrịta chiri anya na ụgbọ ha na-arịọ arịrịọ ị nwere ike ịnọ n'akụkụ ụzọ n'ihi nke a kwa, mana ọtụtụ oge ọ bụ nchekwa na ọ bụ ụkpụrụ nchekwa onwe onye. Yabụ ee, ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-ada iwu ma ọbụlagodi mgbe ha mere ya dị oke egwu.
Mmetụta nke omume a nke ndị mmadụ na-akwa bụ enweghị isi mgbe ị lere anya na ọnụọgụ ị na-eleba anya na enwere nsogbu ọ bụla ị kwenyere na ọ dị ize ndụ nye onye ọ bụla nọ na UK ihe dịka mmadụ 1,700 kwa afọ m na-egbu n'okporo ámá na ole nke ndị ahụ na-enweta igwe kwụ otu ebe na-adịkarị n'etiti efu na abụọ ha abụghị ndị na-ewu onwe ha dị ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè n'ihi na nsogbu dị nro nke mmadụ nwere na-akpachapụ anya ọbụlagodi mgbe ha nọ n'ime ya na nke ahụ bụ ihe jọgburu onwe ya na ihe ị na-enweta n'ụgbọala n'ihi na ndị mmadụ nọ ụgbọ ala nwere eriri oche, akpa ikuku, ngịga kachasị mma, nwee mmetụta dị mma nke na ha nwere ike ịkparị mkparị akụrụngwa na ụdị mpụ ndị nwere ike ime karịa Na-egbu ndị mmadụ ma ọ bụ ndị isi agwa bụ 13 afọ na West Midlands Echere m na m nyere n'efu gafere uhie uhie ndị na-agba ịnyịnya ígwè na otu onye n'ime ha agaraghị enwe ike ịchụpụ ha niile, nke pụtara n'ikpeazụ na ihe a niile pụtara imebi iwu ịgba ịnyịnya ígwè dị mma m ga-asị mba, ọ nwere ike iwe iwe , ọ nwere ike? nwere ike na-atụ ụjọ kwa, mana ọ ga-abụ na ọ ga-eyi ndị ọzọ egwu dị egwu n'ihi na ọ bụ ihe na-adịghị njọ, gịnị kpatara na ọ bụghị mmadụ niile na-ekwu maka ịgba ịnyịnya ígwè dị egwu, ọ nwere ike ịbụ n'ihi na ndị nọ n'ụgbọ ahụ na-akpọte ha ma ọ bụ na ọ pụtara ntakịrị ihe mana ị gaghị achọpụta onye ọkwọ ụgbọ ala na-eme 30 na 2001 na ekwentị n'azụ ụkwụ yepdu maara na akụkụ a ga-abịa ihe gbasara ndị ọkwọ ụgbọala anyị nwere ike icheta nwekwara ike ịbụ ndị ọgba tum tum mgbe ha nọ n'ụgbọala, ha na-emebi iwu ma ọ bụrụ na ha eme ebe ahụ nwere ike ịbụ ndụ egwu mmadụ ise n'okporo ụzọ anyị taa na 63 na-akwado ndụ na-agbanwe mmerụ ahụ ma ọ bụrụ na maka ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na-akpata nsogbu ndị a na mmejọ na-eme ka nsogbu ndị ahụ nwee nke gị Nsogbu Ekwentị Mkpesa Ọ nwere ike ịbụ maka ọrụ maka nnukwu ego niile Nsogbu ugbu a ihe ndị anyị na-eme Ọsọ ọsọ ahụ abụghị naanị oke ị hụrụ, ọ bụ ebumnuche ị ga-enweta na omume ọzọ ọ na-ejikarị ọgwụ ọjọọ eme ihe yana ọ dị nwute na ị maara na mgbe ị na-adagharị se, ị maara na ịkwọ ụgbọ ọgwụ na-arị elu Car na 30 mph, o nwere otu ike, otu ikike mbibi dịka obere ihe mgbawa ị zụtara na ọ bụ ya mere anyị ji gbalịsie ike ịbanye n'ime ndị mmadụ , ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọ ala a ị ga-ewere ya n'ezie ka buru n'uche na e nwere ndị na-agafe ụkwụ 448 gburu n'okporo ụzọ UK na 2016, nke ndị na-agafe agafe nwụrụ naanị ịgụnye ndị na-agba ịnyịnya, mana otu n'ime ikpe ahụ nwere ọtụtụ mgbasa ozi na gọọmentị kpaliri ngwa ngwa site na iwu ohuru na ikpe nke ndị na-agba ígwè mere ka ọ dịkwuo mfe Charlie Alliston fefere isi ya mgbe ebubo ya na-eche na Media na-arụ nnukwu ọrụ n'ihi na mgbe anyị nụrụ gbasara ihe mere ebe ọ bụ F The Cyclist's Mistake bụ ihe dị nnọọ obere omume, ọ bụ nnukwu isi akụkọ Ọ bụchacha akụkọ niile ọ dị na akụkọ redio na onye ọ bụla maara na onye na-agba ịnyịnya ígwè mere ihe na-adịghị mma na ọ bụ ihe nhụsianya mgbe nke ahụ mere, mana ọ dị nwute na ụbọchị ọ bụla n'okporo ụzọ anyị ọtụtụ mmadụ nwụrụ iji arụ ọrụ na enweghị nlekọta nke onye n'azụ ụkwụ nke ụgbọ ala na karịa mfe A kọghị ya, enweela ọtụtụ n'ime ndị a n'ime afọ iri gara aga ma ọ bụ karịa Ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ gburu ma ọ bụ merụọ oke ahụ n'ụzọ UK ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara, mana ihe ka ukwuu na uru nchekwa ahụ emetụtala site n'aka ndị nọ n'ụgbọala na ndị ọgba tum tum bụ ndị nọrọla n'ihe ize ndụ. Ọ bụrụ n'ezie na anyị chọrọ ime ka okporo ụzọ anyị dị nchebe, anyị ga-agbanwe mkparịta ụka anyị na mgbasa ozi na-elekwasị anya n'ịgba ịnyịnya na na ịnya ụgbọ ala, ọ bụghị n'ihi na ndị ọkwọ ụgbọala bụ nnukwu ụmụ okorobịa, ọ bụ naanị nghọta nke gụnyere akụkọ ifo na ụgha enyerela aka n'ezie ịkpụzi na iwu ọha na eze ya mere echere m na anyị kwesịrị ikwu okwu ntakịrị na usoro mmadụ ma kwenye ndị mmadụ ọzọ ma anyị nwere ike ịlaghachi azụ na ndụ anyị niile ma ghọta na maka imirikiti, ọ bụ naanị ndị mmadụ na-agagharị kwesịrị ịdịkwu nwayọ na ibe unu. Daalụ maka ikiri Biko amasị na ịdenye aha Hapụ gị kwuru n'okpuru Ma ọ bụrụ na ị na-amasị ihe anyị na-eme, pịa ebe a iji na-akwado ewu
Ndị ọkwọ ụgbọala ọ kpọrọ ndị na-agba ịnyịnya ígwè asị?
Ihe omumu ohuru gosiputara ufoduNdị ọkwọ ụgbọ ala Kpọọ Ndị Ọgba Igwe asị, Agaghi Ada Ada Mgbe Overtaking. Edeela m banyere njem maka afọ 30. Nnyocha ọhụrụ abụọ na-egosi na ụfọdụọkwọ ụgbọala anaghị amasị ndị na-agba ígwènke mere na ha gafere ha n'ime sentimita asatọ n'okporo ụzọ.Mkpebi 21 2018
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ụgbọ ala akụrisị onye na - agba ígwè?
N'ihi ya, anọ m ịnyịnya ígwè na-arụ ọrụ kemgbe m dị afọ 18. Nke ahụ bụ oge gara aga. Enweela m ole na ole na ndị ọkwọ ụgbọ ala, ndị nọ n'ụgbọala, ị maara na ndị mmadụ ga-eme gị ihe ọ bụla mgbe ị dọtara n'etiti okporo ụzọ ma ọ bụ na ha ga-eti gị mkpu, 'pụọ n'okporo ụzọ!' Ihe di otua.
M dara si igwe kwụ otu ebe m ugboro ole na ole, niile m n'ike, ma ruo n'oge na-adịbeghị m dịghị mgbe gbafere. N'ihe dị ka otu ọnwa gara aga, otu nwanyị na-agba obere ụgbọ ala Honda kụrụ m ma na-anya akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'etiti etiti igwe a jupụtara obere foto nke ịnyịnya ígwè, echere m na ọ siri ike ịhapụ m, mana ọ ka kpọọrọ m ghọtara na m na-echeghị echiche maka ihe m ga-eme mgbe ụgbọ ala kụrụ gị igwe kwụ otu ebe. Mgbe ị na-enwe ike ime ihe ọ bụla na niile, na bikers adịghị mgbe niile na-eje ije pụọ n'ihe ndị ahụ.
Ya mere agara m na Ngalaba Uweojii na Seattle maka ngwa ngwa ihe, ọ bụrụ na ihe ọ bụla, m na-enwu enwu ma m nwetara ya. I ma na obi di m uto na o kwusiri. Ihe m mere ozugbo bụ na m na-awagharị n'okporo ámá na-eti mkpu 'FUCK' ugboro ugboro ka ọ nọ ọdụ n'ụgbọ ala ya, nọ ọdụ na-eche ihe mere n'ụwa.
N'ịchọ adrenaline, mgbe ụfọdụ, ị ga-enwerịrị ọkụ tupu ịmalite mkparịta ụka nwere ọgụgụ isi. Yabụ mgbe ahụ - yabụ mkparịta ụka ọgụgụ isi ahụ emeghị n'ezie. Uredgbọala ndị ahụ echebere, yabụ n'eziokwu m chere, sị, 'Oge isi n'okporo ụzọ pụọ.' Ọ na-ele ụdị anya ala hụ m ka m na-agba ọbara ma gbanwee dị ka mpempe akwụkwọ.
You makwaara, M ụdị nke anwale si. Uzo abuo yiri ka o na aru oru. M bupụrụ ọgba tum tum m, ụdị na-atụgharị wiil ndị ahụ, wee laa n'ụlọ.
Ọfọn, m na-atụ aro ihe ndị a. Ọ bụrụ na ị kụrụ na-agbalị nọrọ jụụ ka anyị mee ya mgbe e mesịrị. Mgbe ahụ anyị na-anwa ịnwe mkparịta ụka mara mma, nke nwere nkasi obi karịa mgbe ị na-enweghị isi nke nkọcha niile mgbe ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị ọzọ niile na-akwakọba n'azụ gị.
Maka na ị na-eche nrụgide ahụ, na-akwa emo na Seattle na-akwa emo. Nke a na shit bụ n'ezie. Ọ bụ, chi m, ị na-eche na ị na-mere ya n'ihu.
Mgbe ị kwuru, 'Nwoke ahụ, nwoke ahụ!' Naanị pụọ n'okporo ámá wee kpọọ 911. Echere m na m mere ihe n'echeghị echiche Seattle. Biri na ihere gi.
Na-ebi ya. Ahụrụ m ya ka ọ dị, ahụrụ m ihu ya ka ọ na-acha ọcha mgbe ọ matara na m na-agba ọbara ebe niile, echekwara m, “Ee, ee - ee, ị riri ya. I mere m ihe a. “Ya mere, ọ dịtụla mgbe ụgbọ ala kụrụ gị ka ị na-agba ịnyịnya ígwè gị? M wee nwee mmetụ dị mma, Starsky & Hutch na-agbagharị n'elu mkpuchi ahụ, jisiri ike rituo n'ụkwụ m, jiri mkpịsị ụkwụ m kpuchie ụgbọ ala ha.
Mana ọ matara na ya mehiere ma nyara ụgbọala tupu ọtụtụ ihe emee. Kedu ihe ị mere? Echere m na m guzo n'ebe ahụ na-eti mkpu, 'Heyyyy.' O wee tie mkpu, 'Ndo!' wee pụọ.
E nwere ajọ ikpe ọmụma. Oh ee, abụba m. Dị ka abụba dị ka m nwere ike ịbụ.
You na-ahụ m ugbu a? You na - N’ezie ka m dị mma, abụ m naanị otu plasta ugbu a. Mana achọchara karama niile nke Neosporin ebe ahụ nwa oge, igbe gauze. Ekwenyere m n'ezie na m nwere ọkpụkpụ ọhụrụ n'ikpere aka m.
Ọ dịka okpu ikpere m. Ọ bụ - Echere m na ọ dị mma. Ma, ọ bụghị na ọ bụ ezigbo ihe ọchị? Ọ bụghị ihe ọchị.
Ederede nke ndị obodo Amara.org
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji na-eti mkpu?
Mgbe ị na-aga n'okporo ụzọ, nkwukọrịtabuotu n’ime mkpịsị ugodi nke nchekwa niilendị na-agba ịnyịnyan'ime otu. Mgbe ụfọdụ amkpu bụdị mkpa ma ọtụtụ mgbe, onye na-agba ịnyịnya n'ihu otu ìgwè ga-eche ihu site n'azụ ma jiri akara aka iji gosi ihe ọghọm ma ọ bụ omume akwadoro nye ndị nọ n'azụ.
Anyị na-agba ịnyịnya ígwè bụ ihe ọchị ochie - anyị bụ. Kedu ụdị ọkwọ ụgbọ ala ị bụ? Nwere ike ịmata ụfọdụ ndị na-abịa.- Ọ dịghị ihe dị mma maka The Moaner.- Gbasaa ntakịrị, enyi, ị na-agba ọsọ ọsọ.- Ndo nwoke.- Bịanụ, obere ọsọ ọsọ, obere ọsọ ọsọ.
nhicha diski brekị na mmanya
Ọ dị oke oyi taa. Agaghị anọ na amụma ihu igwe. Ọ dị oke ọkụ ịgba ịnyịnya ígwè taa.
Enwere m oyi ma ọ bụ ihe ọ bụla. Hurtkwụ merụrụ ahụ, ogwe aka na-afụ ụfụ dị ka nke ọma. Butt na-ewute ya n'ezie na sadulu ahụ.
Echere m na m na-eme m overtrained M nnọọ kpaliri ya ntakịrị nke ukwuu - you ga-akwụsị ịkwa ákwá? Argh! - Kpamkpam asị ndị na-eti mkpu. Na-eti mkpu.- you bụ onye na-amụnye igwe kwụ otu ebe mgbe ọ bụla ị gbara? Ogologo oge, mkpụmkpụ, ugwu, ọbụna njem ntụrụndụ na cafe? Ọfọn, ọ bụrụ na ị bụ, ị ga-eleru onwe gị anya ogologo ma sie ike.
Nke ahụ abụghị nnukwu, ọ bụghịkwa amamihe. Họrọ ọkara-wheel ọzọ, ọ bụghị ndị ọzọ fọdụrụ.- Anọla m ha ise, ikekwe ugboro isii ugbu a.
Agara m Brighton tupu egwu mbụ ha. Ha mere ya tupu ha akụtu - Ndoo, jide di ma ọ bụ nwunye. Ekwesịrị m ịkwụsị gị ebe ahụ.
Enwere ngalaba na mita 25, onye ọlụlụ - inweta ihe kacha mma, QOM ma ọ bụ KOM, n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgwọ ọ bụla, bụ ihe kachasị mkpa maka Strava Hunter. Agbanyeghị, ọ na-ewe iwe ma ọ họrọ ịme nke a na otu ịnyịnya. Kama kama iwe iwe, gịnị ma ị tụọrọ ya aro. Ihe ncheta na enwere ihe dị n'ebe ahụ, ebe, a na-akpọ agbụrụ, ihe ndị ị na-asọ mpi megide ndị ọzọ n'okporo ámá n'otu oge ahụ iji hụ ha nke kachasị mma.- Ọfọn, ị mere ya.- Mba, Aghọtaghị m.
Agbaghara m ya. - Ka anyị gaa n’ihu, nri? - Mba Mba, m ga-alaghachi ma mee ya ọzọ, emeghị m ya-anyị anaghị eme ya ọzọ.- Emeghị m ya.
Anaghị m agbago elu na agbada nke ọma. - M na-ezute ndị ọzọ n'elu ụlọ na cafe, nwee mmekọrịta dị mma. - Ewela iwe, nwoke, ị na-eduga m n’èzí.
Bịanụ. Ọ dị njọ, enyi? Nke a bụ KOM! - Ọ gaghị eduga gị n’èzí. Ọ bụ otu ịnyịnya.- Ọ nweghị otu ịnyịnya.- E nwere ụdị ndị ọmarịcha mara mma nke ndị ọkwọ ụgbọ ala, nwoke ahụ bụ onye Trier na-etinye oge dị ukwuu n'ihu, na ikuku.
Ma eleghị anya, ọ na-anwa ime ka ndị ibe ha nwee obi ụtọ, ikekwe dị ka ọ feelingụ dị ụtọ nke nhụjuanya. Ha ga-agbago rue oke ike ma ghara ịrịọ maka enyemaka ọbụlagodi na a hapụrụ ha, belata ije ije, ha ka dị mpako. Ndị enyi m bụ ezigbo hog - Eziokwu, di ma ọ bụ nwunye, enwere m ike inyere aka ebe ahụ? - (na-agba ume) Abụ m ezigbo di.
Ọ dị m mma - nọdụ ala n'ihu n'ihu? Naanị, ị maara, ya mere oyi adịghị oyi. - (na-atụgharị) Nọrọnụ ebe ahụ. - Ọ dị m nwute nke ukwuu, m na-aga, ana m enweta ozi ederede.
You ga-adị mma? - (na-atụ egwu) Ee. - know mara ihe. N'agbanyeghị oge ị na-eme mkpapụ, ha na-abịakarị n'oge.
na-agba ịnyịnya nkịta
O yikarịrị ka ha dinara ụra mana ha na-ekwusi ike na ha ga-enye ngọpụ dị oke mkpa, na-agọpụ. - Odi nma, di. - Kedu ka i si si ebe ahụ bịa? - Ọ dị mma, abịarutere m obere oge n'oge a ka m chere na echeghị m ichere ka m wee malite akaghị - arịba.
Anọ m na-eche gị kwa ụbọchị maka ọnwa asatọ gara aga - Ọ dị mma, enwere m ekele maka nke ahụ. Agaghị m ewere ya dị ka ihe efu.- Ihe otiti nke njem otu.
Typedị ọkwọ ụgbọ ala a nwere ike ịnwe ụkpụrụ: 'Ya adịla njikere. Chere, gịnị kpatara ị ga-eji jikere? You bụ di na nwunye, ha. 'You na-enwekarị azụ gị, ọ bụghị ya? Ha ga-enyere gị aka.
Nke ahụ, ma ọ bụ na ị bụ obere nzuzu na ndụ - Dan, ewela m jụọ enyi gị, mana ị naghị eme obere mgbapụta na gị? Nweghị ihe ị ga-eri, ka ị nwere? Agụụ na-agụ m ezigbo agụụ, echefuru m ya. Ọfọn, ị nwere ego. Enwere m ike-- Gaa (beep) zụta ihe.- Thisdị ndị na-agba ịnyịnya a na-amakarị n'azụ otu, ọbọgwụ ma dive, pụọ na ifufe ma chekwaa ike ha dị oke ọnụ.
Ihe ọ bụla ị na-eme, emela ya ka ọ na-atụ anya ntụgharị site na ịnọdụ ala na sprinter. Naanị na-atụ anya mbigbọ mgbe ha na-enwu ndị na-ebugharị n'azụ maka ịgba ọsọ na obodo na ememe na-ezighi ezi mgbe ha meriri. - Anyị niile maara ma ọ dịkarịa ala otu n'ime ụdị ndị ọkwọ ụgbọ ala a, na n'eziokwu, n'okpuru isiokwu a, anyị nwere njikọ nke ụdị ọkwọ ụgbọ ala ọ bụla.
Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere enyi dabara na nkọwa a, zigara ha njikọ ahụ ugbu a. Site n'ụzọ, ụdị ọkwọ ụgbọ ala ị bụ, Si? Enwere m ike ijikọ - M ga - ekwenye gị - enwere m ike ịgwa gị na anaghị m enwe nsogbu na anaghị m anọdụ ala na ya n'ihi na enweghị m ike ịgba ọsọ, mana m na-egbu oge mgbe niile, anaghị adị njikere , Na-amasị m na-akwọ ụgbọala Ọkara-igwe kwụ otu ebe, maa a na-akwado nke otu ma ọ bụ ndị ọzọ na KOM, ya mere, ee, m eleghị anya, a nro na m nwere ike n'ezie nọkwasị, nri? - Eji ya eme ihe, ka m? kwaa ákwá nke nta, ọ bụ ezie na abụghị m onye na-agba ọsọ, m ka na-anọdụ ala n'ihi na m na-achọ ịchekwa ntakịrị ike. Nnọọ ma echere m na amaghị m, echere m na m bụ ụdị onye na-agba nke na-anọghị n'isiokwu a, a bụ m ụdị mmadụ a ka na-eche na ọ dabara adaba mana ozugbo ịrị elu ahụ ghọtara na m na-anya ụgbọ ala siri ike ma ọ bụghị dị ka m dịbu - echere m na o nwere ihe jikọrọ ya na enweghị agụụ, Dan, n'ihi na ọtụtụ akụkọ gị na-amalite, 'Oge a na otu ule Seville,' Ọ bụ ihe ọchị. ' - Ọ dị mma, abụ m onye na-agba ọfụma. - Kpọmkwem, mgbe ahụ ka anyị gaa.
Ah, ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ isiokwu ọzọ ka m na-ege ntị na akụkọ ọzọ site na Dan's Seville team team, lelee nke a ka ị nwee ike ịmata onwe gị na ụfọdụ ndị enyi gị, ọ bụ ihe kachasị elu iri ngọpụ. Ya mere gaa n'ihu ugbu a, mee nke ọma. Nri, gbadata, kedu ihe na-esote Sevilla Test Team? - Ọfọn, usoro a yiri ezigbo site na elu azụ na 2010.
Gịnị mere ndị mmadụ ji akwụsị ịgba ịnyịnya ígwè?
Dabere na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị zaghachirinụ, ihe kachasị mkpa na-eso akpataokirikiriojiji, na abụghị ntụkwasị obi ụgbọ ala, bụ egwu nke ihe egwu site n'ụgbọ ala. Edere omume ọkwọ ụgbọ ala na ọsọ ọsọ dị ka ihe ndị kachasị dị egwu.
Gịnị mere ndị ọkwọ ụgbọala ji akpọ ndị na-agba ịnyịnya ígwè asị nke ukwuu?
N'agbanyegh i ot 'ui si' erube isi n'iwu 'ma obu ka i jiri obi oma na-eme co there nke nwere obereọkwọ ụgbọalana nanịasị ndị na-agba ịnyịnya ígwèn'ihi na ịnọ n'okporo ụzọ na ọ na-atụ ụjọ.Ndị na-agba ịnyịnya ígwèbụ ndị na-enweghị nsogbu ma ọ naghị eweukwuugbalịa ịgbanwe omume iji chebe ha nke ọma.
Kedu onye ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na onye na-agba ígwè agbaa ụgbọ ala?
Ọ bụrụihe ọghọm ahụ mere n'ụzọ ma ọ bụ ọrụ, ma ọ bụ mgbe ọ na-arụ ọrụ, ọ na-atụ aro na mkpuchi nke ndị were ha n'ọrụ ga-ekpuchi ha.Ọ bụrụiheonye na-agba ígwènwere inshọransị ezughi oke ọ nwere ike bụrụrịrị ihe dị mfe ịnweta na mkpuchi gị ma hapụ ụlọ ọrụ mkpuchi ka ọ mee ihe megide onye ọ bụlaonye kwesiri ya.
Olee nsogbu ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-enwe?
Igwe na-ezighi ezi ga-enwe ahụ erughị ala, na-eme ka ị chọghị ịgbagharị dị ka ịchọrọ ma ọ bụ gaa ogologo njem. Na mgbakwunye, ọ nwere ikeakpataolu mgbu, azụ mgbu na ikpereokwu. N’ụzọ dị oke mkpa, ọ bụrụ n’inweghị obi ike na igwe kwụ otu ebe gị n’ihi na o buru oke ibu, ị nwere ike ịnwe mmetụta na-adịghị mma n’okporo ụzọ, na-etinye gị n’ihe egwu.
Gịnị na-eme ụkwụ gị mgbe ị kwụsịrị ịgba ịnyịnya ígwè?
Mkpụrụ akwara na-adị ogologo oge karịa ntachi obi, ndị na-eme egwuregwu nwere ike ọ gaghị achọpụta ọtụtụ mgbanwe ebe a na-erughị izu atọigwe kwụ otu ebe. Ma, ọ bụ ezieụkwụ gịike agaghị ebelata ngwa ngwa dị ka ụfọdụnkeihe ndị ọzọ, ọ ka ga-agbadata.June 8. 2020bọchị 2020
Onye onye ọgba tum tum ahụ wakporo na iwe iwe?
Ihe onyonyo pụtara n’oge onye ọkwọ ụgbọala wakporo onye ọgba igwe n’okporo ụzọ iwe ya. Vidio ahụ, enwetara na GoPro nke onye na-agba ya, na-egosi onye ọkwọ ụgbọ ala na-eru nso n'akụkụ ụzọ na-ezighi ezi nke na-akpata esemokwu. Onye na-agba ịnyịnya ígwè Si Shimells kwuru na onye ọkwọ ụgbọ ahụ tụgharịrị n'ime ya, tupu ya akụ ya isi na windo.
Ọ nwere ụzọ iwe megide ndị mmadụ na igwe igwe?
Prọfesọ Haworth gwara ndị Daily Mail Australia, sị: 'Ọ bụrụ na anyị ji okwu ahụ bụ ndị mmadụ agba ịnyịnya ígwè, kama ndị na-agba ịnyịnya ígwè, anyị na-enye okwu nke ga-adị ka nke mmadụ na -adịghị ka otu ụdị. Otu nnyocha e mere nke Ford Australia nke metụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2,000 ọkwọ ụgbọala, chọpụtara na ọkara kwenyere na iwe iwe megide ndị na-agba ịnyịnya.
Olee otú ọgụ iwe n'okporo ụzọ ahụ si malite?
Onye na-agba ịnyịnya ígwè ahụ na-emegwara site na iburu igwe kwụ otu ebe ya ma na-achọ ịkwọ ya site na windo na ọkwọ ụgbọ ala na ihe ga-abụ otu n'ime mwakpo iwe-oke pụrụ iche nke eserese n'okporo ámá Australia. Ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala kwụụrụ n'azụ ihe merenụ hụrụ ọgụ ahụ kpụ ọkụ n'ọnụ n'etiti ndị ọkwọ ụgbọala n'oge ehihie.